Sidee loo dilay Almaas Elman Cali Axmed? [Warbixin ku saabsan su'aalo ka dhashay Dilkeeda & Taariikhda Qoyska] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
BanaadirTooshka GJXog cusubXulashada
Allaha u naxariistee waxaa maanta lagu dilay gudaha Xerada Xalane ee magaalada Muqdisho Almaas Elman Cali Axmed oo ahayd haweeney hore u soo noqotay xoghayaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi, kuna howlaneyd arrimaha samafalka.
Almaas ayaa la sheegay inay rasaas haleeshay xilli ay saarneyd Gaarigeeda oo marayey jidka yar ee isku xira Xalane iyo Garoonka Muqdisho ee Gudaha Xalane; waxayna ku sii jeeday magaalada Nairobi oo ay deganayd, iyadoo xilligan u shaqeyneysay xafiiska xiriirka iyo isgaarsiinta ee Midowga Yurub ee Soomaaliya.
Dilka Almaas oo ay si weyn uga naxeen dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa ka dhashay su’aalo fara badan oo ku saabsan cidda ka danbeysay dilkeeda iyo sida ay ku dhacday in gudaha xarunta Xalane uu dil ka dhaco oo ay wehliso awoodda ay dowladda ku leedahay xerada Xalane..? waxaana weli jirin wax faahfaahin ah oo ay falkan ka bixiyeen AMISOM iyo dowladda Soomaaliya marka laga reebo inay baarayaan.
Wararkii ugu horeeyay ee soo baxay ayaa ahaa in dilkeeda ay dhalisay rasaas habow ama wiifto ah, taasoo su’aalo badan ay ka keeneen Soomaalida baraha bulshada oo tacsida murugada leh ka sokow su’aalo iska weydiiyey xerada #Halane, iyadoo magacaasi ka mid noqday kan ugu hadal heynta badan baraha bulshada saacadihii ugu danbeeyay.
Sawir-qaade Siciid Fadhiye oo la socday Almaas, lana saarnaa Gaariga ayaa ah markhaatiga ugu weyn ee kiiskan, waxaana dilka kadib lagu xiray saldhiga Garoonka Diyaaradaha arrimo aan la garaneyn, iyagoo lasii daayey saqdii dhexe, saacado kadib falkaasi markii ay dadaal u galeen mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya. Siciid ayaa caddeeyay in weerar lagu soo qaaday Gaarigooda.!
Almaas waxay dad badan ku sifeeyeen qof samafale ah, waxayna kasoo jeedaa qoys ku caan baxay u ololeynta nabadda iyo samafalka. Waxa saddex ku ahayd laba gabdhood oo iyaguna taariikh ku leh samafalka iyo halganka Soomaaliya. Tan hore waa Ilwad Elman oo ah gabar u ololeysa nabadda, sanadkanna ku jirtay dadkii loo sharaxay Abaal Marinta Caalamiga ee Nabadda ee Noble Peace Price iyo Iimaan Elman oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xooga dalka Soomaaliya.
Almaas waxay ka howlgashay Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya intii u dhaxeysay sanadihii 2016kii iyo 20017-kii, waxayna iyada, hooyadeed Fartuun C/salaan kasoo laabteen Dalka Canada si ay Soomaalida wax ugu qabtaan.
Waxaa lagu xusuustaata Qoyska Almaas inay ka shaqeeyaan xuquuqda aadanaha iyo nabadda, taasoo ay ka dhaxleen aabahood Elman Cali Axmed oo 9-kii bishii March ee sanadkii 1996dii isna lagu dilay magaalada Muqdisho.
AMISOM iyo dowladda Somalia ayaa looga fadhiyaa baaritaan cad oo ku saabsan sidii loo dilay iyo ciddii ka danbeysay falkaas naxdinta leh.
Almas Elman Ali
Previous articleAKHRISO: Shan Qodob oo ay isla qaateen Madaxweyne Farmaajo, Sheekh Shariif iyo Xasan sheekh [Raaligelin uu bixiyey..]
Next articleDowladda Somalia oo War Culus kasoo saartay Dilkii Marxuumad Almaas Elman [Baaritaan adag oo lagu soo qabanayo..]